Tiirkii Halganka Umada Somalida Ogadeeniya Dr. Dolal, Januray 17, 2009 – Rasaasa News
Jan 17, 2010 Dr. Dolal, ONLF
Maanta oo ay bisha January 17, 2010, waxay ku beegan tahay dhimashadii Shahiid N/hure Dr. Maxamed Siraad Dolal, oo bishan bisheedii 2009 ku shahiiday gudaha dhulka Somalida Ogadeeniya.
Maalintaa iyada ah, waxay ummada Somaliyeed, gaar ahaan ummada Somalida Ogadeeniya meel ay joogtaba u ahayd maalin madow oo naxdin, calool xumo iyo iscilkaambi uu si weyn u saameeyey.
Sababtu ma ahayn in uusan Dr. Dolal dhiman karin, balse waxaa calool xumada sabab u ahaa in halganka Somalida Ogadeeniya ninkii gardaadiyey uu god galay, isaga oo ayna munaasab u ahayn nidaamka uu u dhintay.
Dhimashada waxaa ka daraa dhaawaca halganka soo gaadhay, dhawaaca halgankana waxaa ka sii daraa dhag xumada soo gaadhay ummada Somalida Ogadeeniya iyo kala dhaqaaqa soo foodsaaray. Sababtuna waxa weeye xumaanta iyo huqdiga naxli ee halganka taabtay, ka dib markii dilka Dr. Dolal ay gaysateen xuno ka mid ah dadka halganka ku jira.
Dr. Dolal, waxaa uu u ahaa ummada Somalida Ogadeeniya Mahtama Gandhi Hindiya iyo Dr Che Guevara oo u dagaalamay dadka reer Kuuba.
Ilayskii u baxay ummada Somalida Ogadeeniya usha ninkii u hayuu ahaa, taariikhdu iloobi mayso inta uu jiro arliga Somalida Ogadeeniya iyo ummadiisu ama uu ka dhalanayo mid buuskiisii buuxiya.
Maadaama ay tahay maalintii uu shahiiday Dr. Dolal, waxaanu Eebe Weyne uga baryeynaa in uu Janadii geeyo ummada Ogadeeniyana uu u keeno mid halgankii uu curiyey Dr.Dolal daadaheeyo oo guul gaadhsiiya.
Waxaanu Jecelahay in aan u mahad celino media Xaajo.com oo iyadu aad isaga xilsarta dhacdooyinka ku saabsan halganka ummada Somalida Ogadeeniya iyo dhacdooyinka.
Hadaanu nahay qoraayada bogga rasaas.com, waxaanu si gaar ah uggaga mahad naqaynaa sida ay xaajo.com u soo bandhigtay arimaha la xidhiidha dilkii Dr. Dolal.
Waxaa Meelo Kala Duwan ka Dhacay Shirar Lagu Xasuusanayo Dr.Maxamed Sirad Dolal